निर्मला पन्तको आत्माले शान्ति नपाएको बाल दिवस ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर भव्यताका साथ मनाइयो । बालअधिकार सम्बन्धी संघ, संस्थाहरुले प्रदर्शन र चेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरे । केन्द्रीय बालकल्याण समितिको आयोजनामा राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा एक भव्य समारोह सम्पन्न भयो । सो कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरिन् । यो वर्षको बालदिवसमा राष्ट्रिय नारासँग जोडेर “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल : बाल अधिकार सबैको सरोकार” भन्ने नारा तय गरिएको थियो ।
बालदिवसको इतिहास कोट्याउँदा तत्कालीन श्री ५ मुमा बडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहको जन्म दिनको अवसर पारेर वि.सं. २०२२ सालदेखि भदौ ४ गतेलाई बालदिवस मनाउन थालिएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि स्थापित गणतन्त्र पश्चात बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि- १९८९ लाई अनुमोदन गरेको वि.सं. २०४७ साल भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर, १९९०) दिनको सन्दर्भ पारेर नेपाल सरकारको निर्णयानुसार हरेक वर्ष भदौ २९ गते बालबालिकाको राष्ट्रिय पर्वको रुपमा राष्ट्रिय बालदिवस मनाउन थालिएको हो ।
बालदिवस मनाइ रहँदा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ४८ दिन बितिसकेको छ । तर अझै पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । अनुसन्धान प्रकृया नै अलमलमा परिरहेको छ । प्रहरी नै हत्याको प्रमाण नष्ट गर्न लागिपरेका थप प्रमाणहरु बाहिर आइरहेका छन् । अनुसन्धानको नाममा गलत व्यक्ति र सर्वसाधारणले बिनासित्तिमा दुःख पाइरहेका छन् ।
पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सर्वसाधारणले दिएको दबाबका विरुद्ध सुरक्षा निकायले गोली चलाएर एक जनाको थप हत्या गरिसकेको छ भने केही घाइते अवस्थामा छन् । प्रदर्शनका क्रममा सुनु खुनाको ज्यान अनाहकमा गयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय च्यानल नेपाल टेलिभिजनकै एक कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमा निर्मला हत्याकाण्डको छानविन गर्न नदिएर सरकारलाई अवरोध गरेको, प्रदर्शन गरेर टिकापुर घटना घटाउन खोजेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । देशको अभिभावकजस्तो मान्छेले अनुसन्धानलाई चुस्त, दुरुस्त बनाइ वास्तविक अपराधिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउनेमा प्रतिबद्ध हुनु पर्नेमा गलत अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । यसले पीडितको चोटमा नुनचुकको काम गर्दैन ? किन सरकारी पक्ष संवेदनशील बन्न सकिरहेको छैन ? आखिर किन ? प्रहरी प्रशासनले वास्तविक अपराधि लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ ? सम्बन्धित व्यक्तिले किन निकृष्ठ अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ? यी प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छन् ।
प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले कञ्चनपुर नै पुगेर तत्काल वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । तर हप्ता दिन बितिसक्दा पनि कुनै उपलब्धि देखिएको छैन । घटनाको र अनुसन्धान प्रकृयाकै छानविन गर्न हरिप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा समिति बनेको छ । त्यो समितिले काम गर्न सकिरहेको छैन । समितिका एक सदस्य वीरेन्द्र केसी प्रमाण नष्ट गर्ने, अनुसन्धान मोडिन सक्ने र आफ्नो ज्यानै खतरामा पर्न सक्ने भन्दै राजिनामा दिन काठमाडौँ आइपुगेका थिए । अनि दुई दिनपछि पुनः त्यही समितिमा फर्किएको घोषणा गरे ।
निर्मला पन्तका बुबाआमा न्यायको खोजीमा अहिले मानवअधिकारकर्मीसहित काठमाडौँमा छन् । उनीहरुको आँसु वाग्मतीको पानीसरी बगिरहेको छ । आफ्नी छोरीको वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाई दोषीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही नगरेसम्म आफूहरु गृहजिल्ला नफर्किने बताएका छन् । निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तले रुँदै भनेका छन् ‘छोरीले न्याय नपाउने हो भने हामीलाई गोली ठोकिदिए हुन्छ ।’
निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्मलालाई आफ्नै छोरी सम्झिएर न्याय दिलाउन आग्रह पनि गरेकि छिन् ‘यदि सरकारले हामीलाई न्याय दिन सक्दैन भने हामी सक्दैनौं भन्नुपर्यो । हामीलाई पनि गोली ठोकेर मारिदिए हुन्छ । तर, हामी न्याय नपाएसम्म घर फर्कदैनौं ।’ यी अभिव्यक्तिले कुन नेपालीको मन नरोला ।
हुन त शुक्रबार अयोजित बालदिवसमा राष्ट्रपतिले निर्मला पन्तले न्याय नपाउनु दुःखद् भएको अभिव्यक्ति दिएकि छिन् । तर के यो अभिव्यक्तिले निर्मलाले न्याय पाउँछिन् त ? कि उच्च निकायमा बसेकाले तत्काल निर्देशन दिनु पनि पर्छ ? यस विषयमा राष्ट्रपति किन मौन ? बालदिवसमा उचित भएन भन्दैमा न्याय पाउने अवस्था आउँछ र ?
सम्बन्धित निकायमा बसेका व्यक्तिले निर्मला पन्तलाई आफ्नी छोरी सम्झेर न्याय गर्नु पर्छ । हरेक सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नी छोरीलाई यस्तो पर्दा के गर्छु म भनेर सोच्नु पर्छ । यदि सोचिएन भने यो घटनाले फरक मोड लिन सक्छ, सरकारप्रति नागरिकको धारणा फरक हुन सक्छ, समग्र प्रहरी प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास गुम्न सक्छ । अझै पनि बेला गुज्रिहालेको छैन । समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ । अनि मात्रै बालदिवस मनाएको सार्थकता मिल्ने छ । १३ वर्षीया निर्मला पन्तको आत्माले शान्ति पाउने छ ।
साढे ३३ किलो सुनकाण्डका आरोपी दिवेश लोहनी साधारण तारेखमा थुना मुक्त